Isingeniso Senkampani - Foshan Lingjie Pro Audio Co., Ltd.
I-Foshan Lingjie Pro Audio Co, Ltd. (phambilini eyayibizwa nge-Guangzhou Lingjie Audio Co, Ltd.) yasungulwa ngonyaka we-2003. Kuyibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu elihlanganisa i-R & D nokukhiqizwa kwesiteji sobungcweti, igumbi lengqungquthela kanye nomsindo we-KTV. It uzibophezele ekuhlinzekeni ubuhle ezinkampanini brand, izinga kanye Professional. Njengamanje, sithuthukise ukubambisana kwezobuchwepheshe namabhizinisi amaningi asekhaya nakwamanye amazwe. Ngefilosofi yebhizinisi lokuphayona nelisha, ukuklanywa komkhiqizo okuhlukile, izidingo zekhwalithi zokwenza kahle, nezindlela zokuhlola eziqinile neziphelele.
Yakha kahle imikhiqizo yayo yomkhiqizo eyaziwayo eholwa yi-TRS. Sekuyiminyaka eminingi, i-Lingjie ihlale inamathela kumqondo womkhiqizo wokuthi "Ukwakha uhlelo lwezinto zokusebenza ezilungele umuntu", kuhlanganiswe inqubekela phambili yezenhlalo, ukuthuthukiswa kwezinkampani kanye nokwenza ngcono umthamo wabasebenzi, futhi ilandelele ngokulandelana i- "Top Ten Competitive Brands in the Lighting kanye ne-Audio Industry "ne" Guangdong Famous Enterprises "nochungechunge lwemiklomelo.
I-Lingjie iye yaziwa kabanzi ngabasebenzisi ekhaya naphesheya kwezilwandle ngenhloso yayo yobungcweti, ezinikele, ethembekile, futhi emisha yebhizinisi, imikhiqizo engabizi kakhulu, amasu emakethe aqinile futhi afanayo, kanye nensizakalo ebanzi futhi ecabangayo emva kokuthengisa. Imikhiqizo, izinsizakalo kanye nezixazululo kufaka phakathi imishini yomsindo ye-karaoke, imishini yokulalelwayo yobungcweti, izingxube nezinsimbi zomngcele neminye imikhakha. Izindawo zokuthengisa nezinsizakalo zihlanganise izifundazwe eziningi kanye namadolobha aseChina, kanye namazwe amaningi kanye nezifunda emhlabeni jikelele, futhi bazibophezele ekuhlinzekeni amakhasimende ngensizakalo esheshayo nekhwalithi ephezulu.
Ifilosofi Yethu Yebhizinisi
Ngemuva kweminyaka eminingi yokuqongelela nentuthuko kulo mkhakha, iLingjie isikhule isuka eqenjini elincane labantu abambalwa nje yaya eqenjini labantu abacishe babe yikhulu manje. Idumela lomkhakha nalo liyakhula unyaka nonyaka, ukusebenza kwezentengiso kuzuze kaningi imiphumela emihle, Imali engenayo ngo-2020 yeqe u- $ 15.000.000! Ngaphezu kwalokho, izinga lokukhula kokusebenza kwezimakethe zaphesheya kwezilwandle livelele ikakhulukazi, elingenakuhlukaniswa nefilosofi yebhizinisi lethu "lokuzibophezela okungaguquguquki kumkhiqizo, ikhwalithi, ubuchwepheshe, kanye nensizakalo".